Hlola Nikko, Japan - World Tourism Portal
Hlola Nikko, Japan
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili eziphezulu eNikko, Japan
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha kaNikko
Bukela ividiyo ngoNikko
Hlola Nikko "idolobha" lesithathu ngobukhulu endaweni Japan. Njengoba kunesibalo sabantu abacishe babe ngama-90,000, iningi laso lisepaki yezwe. Kusenyakatho kwe Tokyo, eSifundeni SaseTochigi.
Ithempeli lokuqala eNikko lasungulwa ngaphezu kwe-1,200 eminyakeni edlule ngasogwini loMfula iDaiya. Kodwa-ke, kwi1616, uShogun Tokugawa Ieyasu owayeseshonile wakwenza kwaziwa ukuthi isifiso sakhe sokugcina kwaba ukuthi abazongena ezihlangwini zakhe “bakha indlu encane eNikko bangifundise njengoNkulunkulu. Ngizoba ngumqaphi wokugcina ukuthula eJapan. ”Ngenxa yalokho, uNikko waba ikhaya lemidlalo yama-Tokugawa Shoguns, esoLuhlu lwamagugu omhlaba lwe-UNESCO. Ngokungafani namathempeli amaningi aseJapan nezindawo eziphakeme zaseJapan, izakhiwo lapha zinobukhulu obukhulu futhi ziwubukhazikhazi, ezinemidwebo enemibala ehlukahlukene neningi leqabunga legolide, futhi zibonisa ithonya elinamandla laseChina. Umqondo othile wesithunzi ubuyiselwa yihlathi elihle kakhulu lezihlahla zemisedari ezingaphezu kwe-13,000, ezimboza yonke indawo.
Kodwa-ke, ngabo bonke ubuhle obukhonjiswa ngamasondo, manje sebombeke emehlweni ezivakashi eziningi ngesimo semidwebo emincane eyenziwe ngokhuni odongeni oluzinzile: izinkawu ezintathu ezidumile ezihlakaniphile.
Isimemezelo esidumile saseJapan siyamemezela I-Nikko wo minakereba “kekkō” iu na. Iningi lezincwadi zabavakashi lihumusha lokhu ngokuthi "Ungasho ukuthi 'muhle' uze ubone uNikko", kepha kunesinye isici kule pun yaseJapan: kungasho nokuthi "Akufanele usho 'okwanele' ngaphambi kokubona uNikko", ngoba i- “kekkō” isetshenziswa ngesiJapane njengendlela enenhlonipho enhle yokwenqaba umnikelo.
Kunehhovisi le-Sight-Seeing Enquiry esiteshini saseTobu-Nikko elingase likunikeze usizo oluthile. Zombili lezi ziteshi zingamakhilomitha amabili ngasentshonalanga kwendawo yendawo yokuhlala.
Ukufinyelela ezingxenyeni ezingcwele, ungathatha iTobu Bus, noma ungasondela futhi usondelene nomakhelwane futhi usebenzise izinyawo zakho ezimbili, ulandele izimpawu zabahamba ngomgwaqo omkhulu. Ukwehla esitobhini sebhasi i-81-85 emugqeni webhasi weTobu 2C kuzokusa endaweni engcwele nethempeli. Uhhafu phakathi kweziteshi nezindawo eziphakemeyo, ungamisa esikhungweni sezokuvakasha (i-591 Gokomachi ndawo;) ukuthola amamephu, ukubuza imibuzo (kukhulunywa isiNgisi), usebenzise i-Intanethi, bese uqeda ukoma kwakho ngamanzi amancane, adonswe ngendle. impophoma. Futhi uma lina, bakhipha ngenhlanhla izambulela futhi uyakwazi ukuzilahla lapho usubuyela emuva. Vumela cishe ihora noma ihora ukuhamba ukusuka esiteshini sesitimela uye ekungeneni kwe-shrine.
Ngaphandle kwezintelezi zenhlanhla ezijwayelekile ezitolo ezinkulu nasezitolo eziyisikhumbuzo ezidayisa imichilo yezingcingo zika-Hello Kitty ngokwale ndawo kunezitolo ezimbalwa ezithokozisayo eziseHippari Dako ezazithengisa i-kimono, i-antique nemimese. Izitolo eziningi zibuye zithengise i-yuba, 'isikhumba' esakha phezulu lapho senza i-tofu, emaphaketheni angayiswa ekhaya ukuyozijabulisa.
Kufanele uzame i-Yuba, 'isikhumba' esakha phezulu lapho wenza i-tofu, kubukeka ngathi ukuyo yonke indawo eNikko. Noma ungeyena fan we-tofu, unambitha muhle kakhulu, ikakhulukazi nge uSoba
(Ama-noodle we-Buckwheat emhluzi wesobho). Yuba futhi kungenye edla kakhulu ukuthula kusuka kuNikko.
INikko Brewery isemaphethelweni edolobha. Khuphuka umgwaqo omkhulu ubheke emfuleni. Wela umfula eduze kwebhuloho elibomvu bese uthatha kwesokudla bese uqhubeka. Kuzoba nge-700m noma ngakwesokunxele. I-Nikko Beer yabo iyisitayela sokujabulisa i-pilsner isitayela, esinikwa ingilazi noma isibambo esikhulu. Muhle kakhulu, ukhrisimu futhi uvuselela futhi ungcono kakhulu empompini. Kwesinye isikhathi kwesinye isikhathi kuba nezikhathi ezithile zokuphuza, ezifana nobumnyama, i-amber nezinsikazi ezikhethekile.
Kukhona isitolo esincane sotshwala ngaphesheya kwesiteshi futhi sinokukhethwa okuthakazelisa kabhiya emhlabeni.